ကနျြးမာရေး: porn ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
ပင်မစာမျက်နှာ ကျန်းမာရေး Porn ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှု
Covid-19 ကပ်ရောဂါသည် ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝများကို ပိုမိုဖိစီးစေပါသည်။ များစွာသောသူတို့သည် ၎င်းတို့၏စိုးရိမ်ပူပန်မှု သို့မဟုတ် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို သက်သာစေရန် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသို့ လှည့်လာကြသည်၊ သို့မဟုတ် အမြန်လှုံ့ဆော်မှုအချို့ကို ရှာဖွေခဲ့ကြသည်။ ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်သည့် ညစ်ညမ်းလုပ်ငန်းသည် အိမ်တွင်ပိတ်မိနေချိန်တွင် ငြီးငွေ့လာသည်ဟု လူအများက အခွင့်ကောင်းယူကာ အသုံးပြုရန် အားပေးသည့် ပရီမီယံဆိုက်များသို့ အခမဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးထားသည်။ ယင်းကြောင့် စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ တဖြည်းဖြည်း မှီခိုမှု၊ ပြဿနာရှိသော အသုံးပြုမှုနှင့် အချို့သူများအတွက် စွဲလမ်းမှုတို့ကို ဖြစ်စေသည်။
ထိပ်တန်းဆရာဝန်တစ်ဦး၏ ဤအလွန်ကောင်းမွန်သော ကာတွန်းဗီဒီယိုကို ကြည့်ပါ။ Indulgence ခေတ်တွင် မျှခြေကို ဘယ်လိုရှာမလဲ။.
အင်တာနက် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ သက်ရောက်မှုသည် ကလေးများအပေါ် သက်ရောက်မှုအပြင် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမှ လွှမ်းမိုးထားသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုမှန်သမျှကို စိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤကောင်းမွန်သော ၈ မိနစ်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ဦးနှောက်ရှိ ဒဏ်ရာကို နားလည်ပါ။ ဗီဒီယို NHS Lanarkshire (စကော့တလန်) မှ
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် ဤအပြုအမူဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှု၏ အဓိကဥပမာအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသော ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကို သတ်မှတ်ရန်အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးအစားခွဲခြင်းရောဂါများ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ချက် Eleven (ICD-11) တွင် အတင်းအကြပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူချို့ယွင်းမှု၏ ရှင်းလင်းချက်ကို တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ၎င်းကို အလေးထားသော အထူးဆောင်းပါးမှ ဤကောက်နုတ်ချက်ကို ကြည့်ပါ။ ICD-11 တွင် အတင်းအကြပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူချို့ယွင်းမှုကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသည်။
အောက်ဖော်ပြပါစာမျက်နှာများသည် သင့်အား အန္တရာယ်များကို ပိုမိုသိရှိနားလည်လာစေရန်နှင့် သင်အားနည်းနေပါက ပိုမိုကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းရေးယန္တရားများကို အသုံးပြုရန် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်များကို ကူညီပေးပါမည်။ သင်လိုအပ်သော နောက်ဆုံးအချက်မှာ အစောပိုင်းတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် အချက်အလက်အချို့ဖြင့် သင်ရှောင်ရှားနိုင်သည့် စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် အဆင်မပြေမှုများကို ထပ်လောင်းထည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ Gary Wilson ၏ နာမည်ကြီး TEDx ဟောပြောပွဲကို ကြည့်ရှုပါ the Great Porn စမ်းသပ်မှု ၎င်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်။ ကြည့်ရှုမှုအကြိမ်ရေ 15 သန်းဝန်းကျင်ရှိခဲ့သည်။ စာတန်းထိုးများကို ဘာသာစကားများစွာဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။
စိတ်ကျန်းမာရေးအပေါ် porn ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစဉ်းစားသောအခါစဉ်းစားရန်အသုံးဝင်သောကိုးကားချက်နှစ်ခုရှိသည်။
"အင်တာနက်ပေါ်ကလှုပ်ရှားမှုအားလုံးထဲကအပြာဟာစွဲလမ်းနိုင်တဲ့အလားအလာအများဆုံး၊" ဒတ်ခ်ျအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များပြောကြသည် Meerkerk et al ။ ၂၀၀၆
“မင်းရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ အသိပညာရှိတဲ့အခါ မင်းဘဝက ပြောင်းလဲသွားတယ်။ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများအတွက် ဇီဝဗေဒအခြေခံရှိကြောင်း သင်အသိအမှတ်ပြုသောအခါ ညီမျှခြင်းမှ အပြစ်ရှိလိမ့်မည်” ဟု စိတ်ရောဂါအထူးကုဒေါက်တာ John Ratey (“Spark!” စာအုပ်မိတ်ဆက် P6) မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြောင်း အသေးစိတ်မဖော်ပြမီ၊ ၎င်းကို စိန်ခေါ်ရန် အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးကြောင်း သတိရကြပါစို့။ အင်တာနက် ညစ်ညမ်းသည် လက်တွေ့ဘဝတွင် လိင်မှုကိစ္စအတွက် ဆန္ဒနှင့် ကျေနပ်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ရင်းနှီးမှုသည် လူသားတစ်ဦးအဖြစ် တစ်ကိုယ်ရည်တိုးတက်မှုအတွက် အရေးကြီးဆုံးသော အတွေ့အကြုံများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်သည်။
ညစ်ညမ်းမှုကို ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပုံကိုလေ့လာခြင်းသည်လူများအားညစ်ညမ်းမှုအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းမှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများကိုကျော်လွှားရန်ကူညီပေးသောတစ်ခုတည်းသောအရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်သည်။ ဒီတော့ဝေး, ကျော်ရှိပါတယ် 85 လေ့လာမှုများ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုညစ်ညမ်းစေခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဤရွေ့ကားအကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဦး နှောက်မြူနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကနေအထိ စိတ်ကျရောဂါ, အနုတ်လက္ခဏာခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်နှင့် flashbacks ။ အစာစားခြင်းမမှန်ခြင်းများ၊ လူငယ်များတိုးပွားလာခြင်းတို့ကြောင့်အခြားစိတ်ရောဂါများထက်သေဆုံးမှုပိုမိုများပြားသည်။ porn သည်ခန္ဓာကိုယ်၏ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်ဆိုင်သောအယူအဆများအပေါ်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။
တစ်ပတ်လျှင်သုံးနာရီကြာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းကသိသာထင်ရှားစေသည် မီးခိုးရောင်ကိစ္စအတွက်လျှော့ချရေး ဦး နှောက်၏သော့ချက်ဒေသများရှိ။ ဦး နှောက်ဆက်သွယ်မှုများပါ ၀ င်ပါက၎င်းတို့သည်အပြုအမူနှင့်စိတ်ဓာတ်ကိုသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ အင်တာနက်ပေါ်မှပုံမှန်ညစ်ညမ်းသောအရက်ကိုပုံမှန်သောက်ခြင်းသည်အချို့သောအသုံးပြုသူများအားစိတ်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများ၊ ဤရွေ့ကားနေ့စဉ်ဘဝနှင့်ဘဝရည်မှန်းချက်များနှင့်အတူသိသိသာသာဝင်ရောက်စွက်ဖက်။ အသုံးပြုသူများသည်နေ့စဉ်အပျော်အပါးများနှင့် ပတ်သက်၍ ထုံထိုင်းနေခြင်းအကြောင်းပြောဆိုလေ့ရှိသည်။
ဒီ5မိနစ်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ အာရုံကြောခွဲစိတ်ဆရာဝန်က ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုကိုရှင်းပြသည်။ ဒီမှာ လင့်ခ် ဆင်းရဲသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလေ့လာမှုများနှင့်ဆင်းရဲသောသိမြင်မှု (စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု) ရလဒ်များကိုလေ့လာခြင်း။ ဤရလဒ်သည်အသုံးပြုသူ၏ကျောင်း၊ ကောလိပ်နှင့်အလုပ်တွင်ကောင်းမွန်စွာအောင်မြင်နိုင်စွမ်းကိုသက်ရောက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ကြည့်ရှုပါ သင်ခန်းစာအစီအစဉ်များ ကျောင်းသားများသည်ညစ်ညမ်းမှု၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ကျောင်းတွင်အောင်မြင်ရန်စွမ်းရည်အပေါ်ကျောင်းသားများသတိပြုမိစေရန်ကူညီရန်ကျောင်းများအတွက်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းကစိတ်ရောဂါဖြစ်စေနိုင်သော်လည်းအချို့လူများသည်သူတို့၏ဘဝများ၌စိတ်ဒဏ်ရာခံစားခဲ့ရပြီးမိမိကိုယ်ကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုကြသည်။ ဤကိစ္စများတွင်လူများသည်မသင့်တော်သောကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့်ယန္တရားများအတွင်းပိတ်မိနေစေသည့်စိတ်ထိခိုက်ဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ပြန်လည်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အကူအညီလိုအပ်သည်။ Clinician နှင့်သုတေသနစိတ်ရောဂါအထူးကုပါမောက္ခ Bessel van der Kolk တို့၏အကြံပေးချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိုပါသည်။အဆိုပါခန္ဓာကိုယ်ရမှတ်ကိုစောင့်ရှောက်"ယူအက်စ်အေအခြေစိုက်။ YouTube တွင်သူနှင့်စိတ်ရောဂါအမျိုးမျိုးနှင့်အမျိုးမျိုးသော (limbic brain) အမျိုးမျိုးသောကောင်းသောဗီဒီယိုများရှိသည်။ ကုထုံး ထိရောက်သောဖြစ်ကြောင်း။ ဒီတစ်ခုမှာသူက၏စွမ်းအားကိုအကြံပြုသည် ယောဂ တ ဦး တည်းထိုကဲ့သို့သောကုထုံးအဖြစ်။ ဒီတိုတောင်းတဲ့တ ဦး တည်းမှာတော့သူကအကြောင်းပြောသွားတယ် အထီးထီးနေခြင်း နှင့်စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ post ။ ဒီမှာသူပြောတယ် စိတ်ဒဏ်ရာနှင့်ပူးတွဲမှု။ ဤတစ်ခုသည်လူအများခံစားနေရသောစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်ဆက်စပ်နေသည် တုပ်ကွေးရောဂါ, COVID-19။ ပညာရှိတဲ့အကြံဥာဏ်တွေပြည့်နေတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါစာရင်းတွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များနှင့်သုံးစွဲသူများကိုပြန်လည်နာလန်ထူသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှပြန်လည်ဆယ်တင်ခြင်းအားဖြင့်တွေ့ရှိရသောအဓိကသက်ရောက်မှုများကိုဖော်ပြထားသည် NoFap နှင့် RebootNation. အသုံးပြုသူသည် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာသည်အထိ လက္ခဏာများစွာကို သတိမပြုမိပါ။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားဖူးပေမယ့် မြန်မြန်ပြန်သက်သာလာပြီလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကဏ္ဍကိုကြည့်ရှုပါ။ Porn ဖြတ် အကူအညီနှင့် အကြံပြုချက်များစွာအတွက်။ သင်ပိုမိုတိုက်ရိုက်အကူအညီလိုအပ်ပါက၊ အသုံးပြုရန်စဉ်းစားပါ။ Remojo အက်ပ် သင့်ဖုန်းဆီသို့ တိုက်ရိုက် ၎င်းကို3ရက်အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည်။
porn နှင့်ပတ်သက်။ အာဏာမဲ့ခံစားရတယ်
ကြမ်းတမ်းရမ်းကားသောရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်း
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ကင်းပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောလိင်ဆက်ဆံမှုများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်း
မိတ်ဖက်ပို။ ပို။ စိတ်ဆိုးခြင်းနှင့်အမျက်ထွက်သည်
လက်တွဲဖော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံလောက်ခြင်းနှင့် porn အားဖြင့်ခြိမ်းခြောက်ခံစားရသည်
တကယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဆုံးရှုံးခြင်း
porn မပါဘဲအော်ဂဇင်ရရှိရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ဖြစ်လာရန်အခက်အခဲ
ထိန်းချုပ်မှုနှင့် compulsive ထဲကလိင်ခံစားရတယ်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု - အော်ဂဇင်ကိုမစွမ်းနိုင်ခြင်း၊ သုတ်ရည်လွှတ်နိုင်ခြင်း၊ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု
လူတစ် ဦး ၏တန်ဖိုးများ၊ ယုံကြည်မှုများနှင့်ရည်မှန်းချက်များနှင့်အဆက်ပြတ်နေသည်
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကျန်းမာရေး (အိပ်ရေးပျက်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုဂရုမစိုက်ခြင်း)
မိသားစုဘဝ (လျစ်လျူရှုခံရသည့်မိတ်ဖက်၊ ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အိမ်ထောင်စုတာဝန်များ)
အလုပ်နှင့်ကျောင်းအလုပ် (အာရုံစူးစိုက်မှု၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်တိုးတက်မှုလျှော့ချ)
တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်ပိုမိုပြင်းထန်သောအကြောင်းအရာများ (သို့) အပြာနှင့်ထိတွေ့မှုအလွန်ပြင်းထန်သောထိတွေ့မှုများလိုအပ်ခြင်း (လေ့ကျင့်ခန်းလက္ခဏာများ)
အထက်ပါစာရင်းကိုစာအုပ်မှလိုက်လျောညီထွေစွာထားရှိပါသည်။အဆိုပါ Porn TrapWendy Malz အားဖြင့် "။ သုတေသနပံ့ပိုးမှုအတွက်အောက်တွင်ကြည့်ပါ။
ဒီစိတ်ဝင်စားဖွယ်သုတေသနမှာအချိန်ကာလ၏အပူ: ဆုံးဖြတ်ချက်ချအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရလဒ်များအရလူငယ်များတွင်“ လှုပ်ရှားမှု၏ဆွဲဆောင်မှုသည်လိင်ဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုများကိုအရှိန်မြှင့်သည့်အရာအဖြစ်အကြံပြုသည်”
“ ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်များအရလူတို့သည်မိမိတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အပြုအမူများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှု၏သက်ရောက်မှုကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ချင်းဖြစ်စေ၊
“ …ချုပ်တည်းနိုင်ဆုံးထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းကစွမ်းအားနည်းတယ် (ထိရောက်မှုနည်းတယ်ဆိုတာပြသထားတယ်) မဟုတ်ဘဲလူတစ်ယောက်ဟာနှိုးဆွပြီးထိန်းချုပ်မှုကိုဆုံးရှုံးသွားစေမယ့်အခြေအနေတွေကိုရှောင်ရှားခြင်းဖြစ်တယ်။ မိမိကိုယ်ကိုအပြုအမူအပေါ်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု၏သက်ရောက်မှုကိုသဘောမပေါက်ပါက၎င်းအခြေအနေများကိုရှောင်ရှားရန်လုံလောက်သောအစီအမံများပြုလုပ်နိုင်သည်။ အလားတူစွာ၊ လူတို့သည်လိင်ဆက်ဆံရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတန်ဖိုးမထားသူများသည်ထိုကဲ့သို့သောတွေ့ဆုံမှုများမှဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပျက်စီးမှုကိုကန့်သတ်ရန်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ရန်ပျက်ကွက်ဖွယ်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် '' ပဲပြောပါ '' ကိုကိုင်တွယ်သောဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး သည်ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုအတွင်းကွန်ဒုံးတင်ရန်မလိုအပ်ဟုခံစားရလိမ့်မည်၊ သို့မှသာသူသည်သူမအပူရှိန်သို့တက်လာလျှင်ကိုယ်ဝန်သို့မဟုတ် STD ကူးစက်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုများစွာတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ယခုအချိန်တွင်၏။ "
"တူညီတဲ့ယုတ္တိဗေဒအပြန်အလှန်သက်ဆိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ လူများသည်လိင်မှုနှိုးဆွခြင်းမခံရသည့်အခါသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ သူတစ်ပါး၏ပြုမူပုံကိုဆုံးဖြတ်ပြီး၊ လိင်မှုနှိုးဆွမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသဘောမကျလျှင်၎င်းသည်အခြားသူများ၏ပြုမူပုံကိုအံ့အားသင့်သွားစေနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောပုံစံသည်အလွယ်တကူချိန်းတွေ့ခြင်းကိုခံရနိုင်သည်။ အမှန်စင်စစ်၊ ယင်းသည်သူတို့၏ရက်စွဲများကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှုအနည်းဆုံးသောသူများသည်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိသည့်မှားယွင်းသောအခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသီးသန့်ခွဲထားခြင်းကြောင့်အခြားသူတစ် ဦး ၏အပြုအမူကိုလုံး ၀ နားမလည်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
“ အတိုချုပ်ပြောရရင်လက်ရှိလေ့လာမှုကလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကလူတွေကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းထိရောက်စေတယ်။ လိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံရှိသောလူအများစုအတွက်ယင်းသည်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်သင့်သော်လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုပမာဏမှာသိသာထင်ရှားပါသည်။ လက်တွေ့ကျသောအဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များအရလုံခြုံစိတ်ချရသောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာလိင်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများသည်လူတို့အား 'ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောအပူ' နှင့်ကိုင်တွယ်ရန်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်သို့မဟုတ်၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးစေနိုင်သောအပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်စေမည့်အချိန်တွင်ရှောင်ရှားသင့်သည်။ ကုန်ကြမ်းများပါဝင်သောချုပ်တည်းမှုရှိရန်ကြိုးပမ်းမှုများ စိတ်စွမ်းအင် (Baumeister & Vohs, 2003) သည်နှိုးဆွမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောသိသိသာသာသိမြင်မှုနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးကြားမှုအပြောင်းအလဲများကြောင့်ထိရောက်မှုရှိပုံမပေါ်ပေ။
TEDx ဆွေးနွေးချက်ကို Dan Ariely မှကြည့်ပါ ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်ရေး.
စွဲ - အိပ်စက်ခြင်း၊ အလုပ်၊ ဆက်ဆံရေးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဂိမ်းကစားခြင်းတွင်ပင်အခြေခံအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အိပ်စက်ခြင်းအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ လူများသည်“ ဝါယာကြိုးနှင့်ပင်ပန်း” ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်အလုပ်ကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ အဆက်မပြတ်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့် dopamine ဆုလာဘ်ရရှိခြင်းကိုရှာဖွေခြင်းသည်ကန်ရခက်သောနက်ရှိုင်းသောအလေ့အထကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည် 'ရောဂါဗေဒ' လေ့လာခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် စှဲမွဲမှု။ အသုံးပြုသူသည်အလုပ်၊ အိမ်၊ ပြinနာစသည့်ဆိုးကျိုးများရှိသည့်တိုင်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေသည့်အချိန်တွင်အတင်းအကြပ်အသုံးပြုသူသည်စိတ်ကျဝေဒနာကဲ့သို့သောအပျက်သဘောခံစားချက်များကိုခံစားရသည်။ ဤသည်ကသူတို့ကိုနှိုးဆွပေးသည့်ခံစားချက်များကိုပြန်လည်ရယူရန်သူတို့ကိုထပ်ခါထပ်ခါမောင်းထုတ်စေသည်။ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားသောအခါစွဲစတင်နိုင်သည် စိတ်ဖိစီးမှု ဒါပေမယ့်လည်းအသုံးပြုသူတစ် ဦး လည်းစိတ်ဖိစီးမှုခံစားရစေတယ်။ ဒါဟာသံသရာတစ်ခုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းပိုင်းဇီဝဗေဒသည်မျှတမှုမရှိသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုင်ရာ ဦး နှောက်သည်အတိတ်အတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံ၍ ဖြစ်ပျက်နေသောအရာကိုအနက်ဖွင့်ရန်ကြိုးစားသည်။ dopamine နည်းခြင်းနှင့်အခြားဆက်စပ် neurochemicals များလျော့နည်းသွားခြင်းကမနှစ်မြို့ဖွယ်ခံစားချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အထီးကျန်ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခံစားချက်များနှင့်စိတ်သောကရောက်စရာအကြောင်းရင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသည်ဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ လူတွေကညစ်ညမ်းဆေးတွေကိုမစွန့်လွှတ်မှီကသူတို့အလေ့အထဟာသူတို့ရဲ့ဘ ၀ တွေမှာဆိုးကျိုးများစွာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့သဘောပေါက်လာတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးသောအရာများသို့မဟုတ်အပြုအမူများဖြင့်အပျက်သဘောခံစားချက်များကိုမိမိကိုယ်ကိုဆေးဝါးဖြင့်သောက်သုံးလေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြုအမူအားဖြင့်အလွန်အကံျွသောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုခံစားမိခြင်းမရှိဘဲပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ခံစားချက်နိမ့်ကျစေသည်။ အဆိုပါရက်နာအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုအာရုံကြောဓာတုပြန်ခုန်ထွက်သည်။ စကော့တလန်တွင်နောက်တစ်နေ့တွင်အရက်နာကျခြင်းကိုခံစားနေရသောအရက်သမားများသည်ကျော်ကြားသောအသုံးအနှုန်းကိုမကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ သူတို့က“ မင်းကိုကိုက်တဲ့ခွေးရဲ့ဆံပင်” ကိုယူဖို့ပြောကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်နောက်ထပ်သောက်စရာရှိသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်လူအချို့အတွက်၎င်းသည်အလွန်စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊
porn အလွန်အကျွံ ...
အလွန်အကျွံကြည့်ရှုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအလွန်မြင့်မားသောလှုံ့ဆော်မှုခံရသော porn သည်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောလက္ခဏာများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းသည် ဦး နှောက်အပေါ်တွင်တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုမည်မျှရှိသည်ကိုသိရန်ခဲယဉ်းပေမည်။ ဦး နှောက်သည်ဆွခြင်း၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုသို့သော် hangover မှာရပ်တန့်ကြပါဘူး။ ဤပစ္စည်းကိုအမြဲတမ်းအလွန်အကျွံထိတွေ့ခြင်းသည် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအောက်ပါတို့ပါဝင်နိုင်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည် -
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်းသည်က တဦးတည်းရဲ့ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်ဖို့ကတိကဝတ်မရှိခြင်း။ ညစ်ညမ်းမှုများနှင့်ညစ်ညမ်းမှုများတိုးများလာခြင်းနှင့်နောက်ဗီဒီယိုတွင်တစ်စုံတစ် ဦး က ပို၍ ပူပြင်းလာနိုင်သည်ဟူသောအတွေးများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သူတို့၏ ဦး နှောက်ကိုစစ်မှန်သောဘဝမိတ်ဖက်များကနှိုးဆွခြင်းမရှိတော့ဟုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည်စစ်မှန်သောဘဝဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်လိုသောလူများအားတားဆီးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လူတိုင်းနီးပါးအတွက်စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဖော်ပြသည်။ အမျိုးသားများသည်၎င်းတို့သည်စစ်မှန်သောဘဝဆက်ဆံရေးမှရရှိသောနွေးထွေးမှုနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးကျေးဇူးကိုမခံစားရသောကြောင့်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အလှကုန်တိုးမြှင့်မှုမည်မျှပင်ရှိပါစေ ဦး နှောက်ကိုအမြဲတမ်းအသစ်အဆန်းများနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောလှုံ့ဆော်မှုအဆင့်များလိုအပ်နေသောအခြေအနေတွင်ရှိနေသောသူ၏ ဦး နှောက်ကိုစိတ် ၀ င်စားစေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှမအနိုင်ရခွအေနအေ။
ကုသသူများသည်ချိန်းတွေ့သည့်အက်ပလီကေးရှင်းများစွဲလမ်းမှုအတွက်အကူအညီတောင်းသူများပြားလာခြင်းကိုတွေ့ရသည်။ နောက်တစ်ချက်နှိပ်ပါ၊ သို့မဟုတ်နောက်တစ်ချက်သို့ပိုကောင်းသည့်အရာတစ်ခုအမြဲတမ်းရှိလိမ့်မည်ဟုကတိက ၀ တ်ကလူတစ် ဦး တည်းနှင့်သာသိကျွမ်းခြင်းကိုအာရုံစိုက်စေသည်။
တက္ကသိုလ်အရွယ်ယောက်ျားလေးများကိုလေ့လာမှုမှာ လူမှုရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်အတူအခက်အခဲများ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုမြင့်တက်အဖြစ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်လျှော့ချလူမှုရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာအဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။
တွေ့ရှိခဲ့သူတို့ရဲ့ 20s အတွက်ပညာတတ်ကိုရီးယားယောက်ျား၏လေ့လာမှုတစ်ခု• လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရရှိရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကို ဦး စားပေးသည်။ သူတို့ကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာထက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းကြောင်းသူတို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်.
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းကိုစမ်းသပ်ပြသခဲ့သည် ပိုပြီးအဖိုးတန်အနာဂတ်ဆုလာဘ်များအတွက်ဆန္ဒပြည့်နှောင့်နှေးစေရန်တစ်ဦးချင်းရဲ့စွမ်းရည်ကိုလျော့ချ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရလျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုယ်သင်စိတ် ၀ င်စားမည့်အစားအိမ်စာလုပ်ခြင်းနှင့်ပထမဆုံးလေ့လာခြင်းကဲ့သို့သောသင်၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုမချင့်မရဲဖြစ်စေသည်။ ကြိုးပမ်းမှုမတိုင်မီဆုလာဘ်ချပြီး။
• 14 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးများ၏လေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်တစ်ဦးမှဦးဆောင် လျော့နည်းသွားပညာသင်နှစ်စွမ်းဆောင်ရည်၏အန္တရာယ်အဆိုပါသက်ရောက်မှုမြင်နိုင်ခြောက်လအကြာတွင်အတူ။
အမျိုးသားတစ် ဦး သည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်လေလေ၊ လိင်ဆက်ဆံစဉ်၎င်းကိုအသုံးပြုလေလေဖြစ်သည်။ ဒါဟာသူ့ကိုပေးနိုင်ပါသည် porn script များထွက်လုပျဆောငျဖို့အလိုဆန္ဒ သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတူတမင်တကာ arousal ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိင်စဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းပုံတွေကို conjure ။ ဤသည်မှာလည်းသူ့ကိုယ်ပိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကိုကျော်စိုးရိမ်ပူပန်စေပါတယ်။ ထို့ပြင်ပိုမိုမြင့်မားညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအဆိုးတနာတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ကရငျးနှီးအပြုအမူတွေကိုခံစားနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်အထက်တန်းကျောင်းအဆုံး၌ကျောင်းသားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်မြင့်မားသောဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည် အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ။ ဒီအုပ်စုထဲမှာပုံမှန်စားသုံးသူများ၏လေးပုံတစ်ပုံတစ်ပုံမှန်မဟုတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။
•လိင်၏ 2008 လေ့လာမှုအတွက် ပြင်သစ် ယောက်ျား 20-18 "လိင်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမရှိအကျိုးစီးပွား" ၏ကြောင်း 24% တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာပြင်သစ်အမျိုးသားရေးအသွင်မြင်လာအောင်နဲ့တခြားစီဖြစ်နေပါတယ်အလွန်ဖြစ်ပါတယ်။
2010 အတွက်ဂျပန်မှာတော့•: တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကအစိုးရ စစ်တမ်း 36-16 အသက် 19% ယောက်ျား "လိင်မစိတ်ဝင်စားမှုရှိသည်သို့မဟုတ်ပါကတစ်ဦးခြင်းကိုမနှစ်သက်ကြ" ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကကို virtual ရုပ်သို့မဟုတ် anime ကြိုက်တတ်တဲ့။
Morphing လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ ...
တချို့လူတွေမှာတော့မမျှော်လင့်ဘဲရှိစေနိုင်ပါတယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ morphing သူတို့ porn ကိုအသုံးပြု။ ရပ်တန့်သည့်အခါအရာပြောင်းပြန်။ ဒီနေရာမှာပြissueနာကဖြောင့်တဲ့သူတွေလိင်တူချစ်သူတွေ၊ လိင်တူချစ်သူတွေကိုကြည့်တဲ့လိင်တူချစ်သူတွေ၊ အချို့သောသူများသည်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့်ဝေးဝေး မှနေ၍ လိင်မှုကိစ္စများတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုများနှင့်စိတ်ဝင်စားမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိမ်းညွတ်မှုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှတ်အသားဆိုသည်မှာအရေးမပါ။ နာတာရှည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းက ဦး နှောက်ကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လည်ပတ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေသည်။ လူတိုင်းကထူးခြားတာကြောင့်အပြောင်းအလဲမလုပ်ခင်မှာပျော်စရာအတွက်ဘယ်လောက်များများလုံလောက်သလဲဆိုတာပြောဖို့မလွယ်ဘူး။ လိင်အရသာပြောင်းခြင်းသည် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုကိုညွှန်ပြသည်။ လူတိုင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကွဲပြားခြားနားတုံ့ပြန်လိမ့်မယ်။
ပေါ်မှာငါတို့အပိုင်းမှာကြည့်လိုက်ပါ Porn ဖြတ် အကူအညီနှင့်အကြံပြုချက်များစာရေးဘို့။
<< လက်ကျန်ငွေနှင့်မညီမျှမှု ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ >>